सम्भव छ छारे रोगको उपचार – Etajakhabar
सम्भव छ छारे रोगको उपचार
डा. अरुणकुमार सिंह बालरोग विशेषज्ञ छारेरोग के हो ? स्नायुसम्बन्धी एक प्रकारको बेहोस हुने समस्यालाई छारेरोग भनिन्छ । तर, सबै बेहोस हुने रोग छारेरोग होइन । दिमागको विकासक्रममा वा बनावटमा केही अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई पनि छारेरोग भन्न सकिन्छ । यो रोगलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने आदि विभिन्न नाम पनि दिइएको छ । प्रायजसो कमजोर दिल भएका व्यक्तिलाई छारेरोगको सम्भावना बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
छारेरोगका प्रकार यो रोग धेरै प्रकारका हुन्छन् । यदि मानिसले बेहोसी अवस्थामा जिब्रो टोक्ने, आँखा पल्टाउने गर्छ भने त्यो कडा खालको छारेरोग हो । तर, कतिपय अवस्थामा छारेरोगको खास कारण थाहा नहुन सक्छ । मस्तिष्कमा हुने ट्युमर, इन्सेफलाइटिस, मेनेन्जाइटिस भयो भने पनि छारेरोग देखिन्छ । केही मानिसमा नुनको कमीले पनि यो रोगको लक्षण देखिन सक्छ । नुनको मात्रा पूरा भयो भने यो रोग आफैँ निको हुन्छ । यस्तो प्रकारको छारेरोग लाग्यो भने लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्दैन ।
रोगका लक्षण छारेरोग एक दिमागी समस्या हो । यदि यो समस्याबाट पीडित रोगीले अचानक आँखा तिर्मिराउने र मन झस्किने संयोग भएमा एक्कासि मुच्र्छा भएर ढल्न पुग्छ । उत्तानो परिसकेपछि हातखुट्टा छटपटाउँछ । केही बेर हातखुट्टा छटपटाएर मुखबाट राल छोडेर करिब आधा घन्टासम्म रोगी बेहोस हुन्छ । यो समयमा रोगीलाई छोयो भने अरूलाई सर्न सक्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ । करिब आधा घन्टापछि रोगीलाई होस आउँछ ।
उपचार के हो ? छारेरोगको उपचार त्यसको प्रकार हेरेर गरिन्छ । साधारण किसिमको रोग बच्चाहरूमा छ भने २–३ वर्षसम्म औषधि दिएर निको पार्न सकिन्छ । यो रोग ७० देखि ८० प्रतिशत बिरामीलाई छोटो समयसम्म, ५ देखि १० प्रतिशतलाई लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन् । छारेरोगको शल्यक्रिया पनि गर्न सकिन्छ । धेरैजसो बिरामीका लागि औषधि नै उत्तम विकल्प हो । छारेरोगको लक्षण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार गरे निको हुन्छ ।सम्भव छ छारे रोगको उपचार नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक ०८, २०७४ समय: ८:३१:४६